CUDURADA HALISTA AH EE CANAB: KA HORTAGGA, CALAAMADAHA IYO DAAWEYNTA - CANAB
Cudurada sabiibta ee caadiga ah iyo kantaroolka waxtarka leh
Cudurada canab ah - khatar weyn ku ah dhirta. Noocyada ugu macaan badan iyo kuwa waaweyn ayaa weli ah kuwa ugu nugul iyaga, inkastoo shaqada ay tahay midda xoolaha. Sidaa darteed, si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo daweeyo canab cudurada.
Ma taqaanaa? Canab - dhirta kaliya ee adduunka oo daraasadda sayniska gooniya - dillaac.
Necrosis maraakiibta qoryaha
Cudurkani wuxuu badiyaa ku dhacaa sabuubyo yar yar. Dibedda, waxay u muuqataa isbeddelka iyo walwalka dhimanaya ee unugyada ku dhow maraakiibta qoryaha. Canaguna wuxuu ku dhacaa kobaca wuxuuna noqdaa mid u nugul xaaladaha cimilada xun (abaarta, dabayl xoog leh, dhaxan, iwm). Sababta khabiirada cudurka ayaa aaminsan fungi, taas oo gashay qoryaha inta lagu jiro kaydinta jiilaalka. Ka hortagga iyo xakameynta cudurkan waxaa lagula talinayaa:
inta lagu jiro diyaarinta iyo kaydinta geedka canabka ah ma isticmaalaan qalabka ka dhigaya qoyaanka, tusaale ahaan, polyetylen;
unugyada boqoradda canabku waa inay ahaadaan kaliya carrada iftiin leh oo biyo fiican leh;
marmar ku dar bacriminta boric si ciidda ka yar dhirta dhirta.
Ma aha caabuq, maadaama ay sababto dhibaatada dheef-shiid kiimikaad hoose ee saldhiga farabadan. Waxay ku dhacdaa roobab culus ama la'aanta qoyaan. Cudurku si dhakhso ah ayuu u kobcayaa. Baro dhibco iyo qoton leh oo midabkiisu yahay midab madow iyo madow ayaa muuqda. Dhaawacku wuxuu daboolayaa lakabyada qoto dheer ee caleemaha.
Dagaalka ka soo horjeeda qalajinta waa:
ku buufin leh 0.75% chloride magnesium, 0.75% chloride calcium, ama isku dar ah diyaargarasyadan (xoojin - 0.5%);
ku buufinta 3% sulfate magnesium.
Labada xaaladood, daaweynta waxaa la sameeyaa mudo ah 10 maalmood illaa dhammaadka buuxa ee calaamadaha cudurka.
Waa muhiim! Wixii canab, gaar ahaan xasaasiyadda daroogada, daaweynta kiimikada kuma haboon. Xaaladdan, samee Bacriminta adag.
Mid ka mid ah cudurada ugu badan ee fungal ee caleemo canab. Waxay u qaybisaa guuldarada qoyaanka iyo kuleylka. Marka hore, caleenta waxay u muuqanaysaa xargaha iftiinka leh calaamadaha necrosis ee dhexda. Ka dibna xaashidu waxay gebi ahaanba madowyahay, koofiyadu waxay horumarisaa. Miraha dhoobo, qoyaan iyo noqdaan kuwo aan dhadhan lahayn.
Waa muhiim! Dagaalka ka dhanka ah Alternaria waa inuu bilaabaa sida ugu dhakhsaha badan ee labada caleemo ee ugu horeysay u muuqdaan on geedka canabka ah ee guga.
Khabiirada kiisaska cudurada cudurkan leh waxay ku talinayaan:
si taxadar leh uga saar caleemaha dhacday ee canab, caleemaha dhintay, jilif, iwm, maaddaama ay ku jirto fangaska fangaska;
bilowga xilli sii kordhaya si loo hirgeliyo canab Bordeaux, ka dibna - sida loo baahan yahay, 10-14 maalmood kasta. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa daawooyinka "Kvadris", "Rapid Gold", "Skor", "Kolfugo Super."
Magaca labaad ee cudurka fungal waa kallana xidid. Waxaa lagu gartaa by browning ee xididdada canab, waxay noqdaan dabacsan oo jilicsan, caleemaha qalalan. Mushroom waxaa lagu arki karaa saldhigga baadiyaha iyadoo indhaha qaawan leh. Warshadu way dhimataa. Khubarada waxay kugula talinayaan:
goocaan tuulooyinka beerta beertayda iyo kaymaha iyo geedo kalluunka si looga hortago caabuqa foosaska fungal;
burburiyaan dhirta bukaanka ah iyo daweynta ciidda iyaga ka hooseeya leh bakteeriyada ku jirta fungicides.
Waa muhiim! Goobta cudurka qaba, canab aan la beerin ugu yaraan hal sano.
Cudurka fungal ee canab, saameynaya berry ee cimilada qalalan. Marka hore, dhibco cad ayaa la sameeyaa on berry. Waqti ka dib, way madow yihiin. Meelaha waxbarashada waxay noqdaan kuwa jilicsan, niyadjabsan. Markaas berry ah bilaabaan si ay u jabiyaan, ubaxyada cad oo u muuqda iyaga, ka dibna - tiro budada ah-madow. Rucubyadu waxay noqdaan kuwo madow madow. Macnaha loola dagaallamo tan iyo cudurrada kale ee saameeya canabka bisil waa kuwa soo socda:
goosashada dhakhso ah marka ay bislaado, si aanay u helin wakhti ay ku kobcaan kalluunka;
Nadiifinta taxaddar leh ee khudradda ayaa weli ku jirta kaas oo fangasku sii ahaan karo.
Sababta cudurku waa fungus. Sida caadiga ah saameyn ku beerta canabka ah ee qeybtii labaad ee xagaaga, ka dib qorraxda ama roobka. Si dhakhso ah ayuu u socdaa. In saacado yar gudahood, berry ah gudcur iyo hoos u. Calaamadaha ugu muhiimsan ee kalluunka cad ee cimilada qalalan waa muuqaalka dhibco casaan, iyo cimilada qoyan - lafaha madow. Miro shakhsi, qayb ka mid ah farabadan ama farabadan oo dhan waa la dhaawici karaa. Goobidda dhulka, berry saameeyaha ayaa noqda dhul dillaac ah cudurka. Si looga hortago loona dagaallamo kalluun cad, qaababka soo socda ayaa loo isticmaalaa:
hubso inaad xakamayso beerta canabka ah ee "Kolfugo Super" ama "Fundazol" daboollada ka dib;
ma geli kartid caleenta geedaha bukaanka ah ee beeritaanka;
Buundada horey u jirtay caleemo cad oo la soo dhaafay ayaa lagu daaweeyaa fungicides 2-3 jeer xilli ciyaareedkii si looga hortago dib-u-qaadista.
Xiddiga ugu horeeya ee cudurku waa muuqaalka midhaha berry qoyan ee rucubyada caadiga ah ee canab. Inta badan, kalluunka acid-ku wuxuu saameeyaa noocyo kala duwan oo dhogorta leh iyo maqaar khafiif ah. Wakhti yar ka dib, tiradooda waxay kor u qaadaa, duqsiyada miraha waxay bilaabaan inay u duulaan urka kallana. Aqoonsiga cudurkan waxaa lagu talinayaa:
si tartiib ah uga saar dhammaan kooxaha isku dhafan;
daaweeyo beerta canabka ah ee cayayaanka, tusaale ahaan, "Fitoverm", dareeraha bordeaux ama baaruud beerta lagu buufiyo.
Ma taqaanaa? Aqoonyahan Faransiis ah Pierre-Marie Alexis Milardé waxay soo saartey dareeraha Bordeaux si gaar ah si loola dagaallamo cudurrada fangas ee canab. Maalmahan, waxaa loo isticmaalaa sidii loola jeedo caalamka iyo dhaqamada kale.
Waxay saameeysaa berry, kaas oo billaabaya inuu madoobaado, qarxo, ka dibna lagu daboolo ubaxyada qoyan ee qoyan. Maadaama aysan jirin habab wax ku ool ah oo looga hortago cudurkan, dareen gaar ah waa in la bixiyaa si looga hortago:
mararka qaarkood u dabciyo ciidda ka yar baadiyaha iyo burburinta haramaha;
wakhti aad ku soo saartid kooxo jirran;
Canab dhirta meel fog oo ka mid ah midba midka kale ee hawo ku filan iyo kululaynta;
berry 1% xalinta dubista ama iodine (30-40 dhibcood oo iodine ah ayaa lagu kala diraa baaldi biyo ah). Daaweynta waxaa la sameeyaa 10-kii maalmood ee kasta tuhunka ugu yar ee kallana.
Cudurka fungal, oo inta badan saameysa beeraha canjeerada ee ku dhow biyaha. The berry si tartiib tartiib tartiib ah oo madow. At qoyaan badan, foomamka caleemaha qoyan, iyo cimilada qalalan ay si fudud u qalalaan. Ka dib marka ay carro ku dhacdo carrada waa sidayaal cudur. Iyada oo kallana madow, dhibco iftiin leh khafiif ah cagaaran madow muuqata on caleemaha, iyo jilicsanaanta madow muuqaalka on afkoda. Maadaama cudurka uu ku dhow yahay lama daaweyn karo, dagaalka ka soo horjeeda waxay hoos ugu dhacdaa ka hortagga:
burburinta buurrada bukaanka, jirridaha, caleemaha;
xoqin beeraha canabka ah.
Jeermisku wuxuu saameeyaa canab inta lagu jiro xilli sii kordhaya. Waxaa muuqata muuqaalka kore ee dhibco madow iyo casaan on the berry, kuwaas oo ay leeyihiin qaab dhismaha. Mustaqbalka, berry ayaa qallajinaya. Waxay kiciyaan horumarinta sunta qorraxda.
Ka hortagga iyo daaweynta waxaa lagula talinayaa:
ilaalinta dhirta canabka ah ee ka soo baxa iftiinka qorraxda;
saarista berry saameeya;
la dagaallama cayayaanka in burburiyo qolof canab ah.
Infekshanka bakteeriyada, calaamadda ugu weyn ee ay tahay sameynta burooyinka hoostiisa hoostiisa. Ka dib markii dhaxan xilliga qaboobaha, xayawaanka sidaas oo kale ah, ayaa carqaladeeya sharafnimada jilifka.
Wixii daaweyn iyo ka hortagga kansarka bakteeriyada ee canabku waxay ku dhaqmeen hababka noocaas ah:
ilaalinta caleemaha yar yar oo ka soo baxaya dhaxan;
ka fogaanshaha dhaawaca farsamada ee wax kasta oo lagu mastarsho dhirta;
Ka qaadista ciriiriga waqtiga dhiman; waqtigaan xaddidan waxaa lagu daaweeyaa 3% xal Bordeaux ama 5% xal sulfate ah;
haddii cudurku mar hore ku dhuftey canab, waxaa lagama maarmaan ah in la dalbado Bacriminta fosfooraska-potassium, oo laga tirtiro nitrogen dhowr sano. Waxaad kaloo isticmaali kartaa ash alwaax.
Cudurka jarmalka waa cudur
Infekshanka fungus wuxuu ku dhacaa waxyeello farsamo ah ee caleemaha iyo laamaha. Cudurka dilaacay waxaa loo wareejiyaa geedo yar yar oo leh caws iyo ciid. Marka hore, dhibco-jilicsan oo jilicsan-muuqaal ah ayaa muuqda on xaashida, iyo ugu dhakhsaha badan caleenta dhicin gebi ahaanba. Harta dhirta noocan oo kale ah waxay noqotaa sidayaal cudurka. Ka hortagga iyo daaweynta cudurka:
burburinta caleemaha saameeya;
digo joogto ah ee ciidda ka yar duurka iyo manjooyin taxaddar leh ee caleemaha;
daaweynta nabarrada ku saabsan laanta dabaysha;
maareynta gu'ga ee caleemaha sabiibka leh fungicides (Ridomil Gold, Bordeaux isku dar ah, iwm); diyaarinta waa in lagu dabaqaa dusha sare ee caleemaha iyo kan hoose;
bacriminta macdanta ee ciidda (sida, nitrateum potassium) iyo Bacriminta organic, taas oo kordhiya caabbinta cudurka.
Necrosis canab ah oo caleenta ah waa cudur fungal ah oo muujiya muuqaalka dabiiciga ah ee maqaarka dhintay ee hoosta ku yaal kortex. Dhibco isku mid ah ayaa la sameeyaa waqti ka dib iyo caleemaha. Ka hortagga iyo daaweynta cudurka waa sida soo socota:
burburinta caleemo dhaca;
digo qoto dheer ee ciidda hoosteeda;
manjooyin wakhti ah oo laamood ah, oo bixiya hawo wanaagsan oo u dhaxaysa caleemaha;
keydinta alaabta wax lagu beerto ee hawada ku jirta;
daaweynta geedo leh xal of sulfate ferrous (4%).
Oidium (xayrta maqaarka)
Iyada oo la jabiyo caleemaha oidiyaanka ah ayaa marka hore la daboolay ubaxyada cad oo leh boogo madow. Dhowr dhibcood mugdi ayaa u muuqda caleemaha, iyo burooyinkuna waxay dhacaan. Dibedda, qaybaha ay saameeyeen ee dhirta waxay u muuqdaan sidii rusheeyeen. Inta lagu jiro Bisaylkiisa canab, canabkihii qarxay, tiro badan oo cawl leh ur aan fiicneyn ayaa ka soo baxa iyaga. Hawlgallada horumarinta cudurka waxay noqon kartaa cimilo kulul ama isbedel muuqda oo heerkulka hawada ah.
Xilliga beerka canabkana laga soo bilaabo oidiyum waxaa lagu sameeyaa xal sulfur kolloid ah (1%). Waxaa lagu soo celiyaa 10-12 maalmood ilaa inta calaamadaha cudurka la waayo. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa daroogooyinka khaaska ah "Acrobat MC", "Carbis Top".
Waa muhiim! Marnaba ma qaadan karto on faafinta ee gooyn dhirta saameeyeen.
Cudurku wuxuu saameeyaa dhammaan qaybaha canabka. Waxay ka bilaabataa meelo yaryar oo yaryar oo dusha sare leh ee caleemaha, kuwaas oo si tartiib tartiib ah kor ugu kaca. Waqti ka dib, caleen waxay noqotaa bunal, dhoobo iyo dhacdaa. Isla la mid ah kuwa ay saameeyeen afkoda, burooyinkeeda iyo berry. Inta badan cudurku wuxuu ku dhacaa qaybta labaad ee guga - qeybta hore ee xagaaga. Ilaalinta canabkiisa cuduradaan iyo cudurada la midka ah ee dabiiciga ah waa:
gubida dhammaan caleemaha dhacday;
qodaya dhulka ku xeeran baadiyaha;
manjooyin wakhti ah oo canab ah oo loogu talagalay hawo wanaagsan;
ku buufinaya duurka iyagoo leh diyaar garoob ah oo bakteeriyo leh (isku dar ah Bordeaux, oxychloride copper) laba marxaladood (kahor iyo ubax ka dib 14 maalmood). Waxaad isticmaali kartaa daawooyinka "Oxyh", "Kurzat", "Hom", "Polyhom".
Magaca kale ee cudurka waa melanosis. Calaamadaha noocyada nafaqada ee dhaqanka. Marxaladda hore ee cudurkan, qiyaastii yaraanta cagaarka ayaa laga arki karaa caleemaha. Marka qoyaan badan, caaryada cirifka ah ayaa sidoo kale ka samaysan kara hoosteeda caleenta. Dhawaan ayay ka soo baxdaa oo hoos u dhacdaa, iyada oo laga reebo siduu cudurku u socdo.
Iska daawee canab by buufin leh xal daciif ah ee Bordeaux isku dar ah. (1%). Si looga hortago cudurka si taxadar leh u burburin caleemaha dhacday iyo baadiyaha waxyeello.
Waxay saameeysaa qaybaha above ee geedka. Calaamadaha cudurku waa:
dhibcaha brown mugdi ah on caleemaha, si tartiib tartiib ah u jeestay dhibco madow;
isbeddelka midabka ee berry ah si ay u noqoto mid mugdi ah, midab aan caadi ahayn, dhadhanka ay sii xumaato;
horumarinta kallana ee caleemaha.
Iyada oo leh dhibco siriyaalka madow, daaweynta ugu fiican iyo ka hortagga waxay noqon doontaa:
Isticmaalka harta dhirta dayrta;
ku buufinta dareeraha Bordeaux ama "Euparenom" inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya.
Chlorosis of canab waxay noqon kartaa labada nooc ee faafa iyo kuwa aan faafin. Oo xaqiiqda ah, iyo kiis kale, dhirta oo carqaladeeya geedi socodka caadiga ah ee photosynthesis, sababta oo ah caleemaha u jeedaa cirro. Koritaanka caleemaha ayaa hoos u dhacaya, caleentuna dhaqso ayey u engegataa oo dhacdaa. Habka ugu muhiimsan ee daaweynta waxaa lagu buufin karaa duurka iyagoo leh daawooyinka birta ku jira, tusaale ahaan, vitriol ama Brexil-chelate. Nidaamka ayaa marar badan soo noqnoqonaya.
Guga ee cudurkan fangas wuxuu waxyeeleyn karaa dhammaan qaybaha aboveground ee baadiyaha. Ilaha infekshanka waa hadhaaga dhirta buka. Marxaladda hore, cercosporosis waxaa lagu ogaadaa muuqaalka dhinaca dambe ee caleemaha lakabka midabka saytuunka iyo mugdi madow, oo ugu dambeyntii qalalan. Berry ku adag iyo qalafsan. Dhowr canabka iyo caleemo dhicid. Xajmiga canabka waxaa lagu daaweeyaa dareeraha dareeraha Bordeaux. Haddii canabku aanu qiime gaar ah lahayn, waa la jarjaray.
Cudurada ugu badan ee canabku waa la iska ilaalin karaa iyadoo si taxadar leh looga saarayo haraaga dhirta ka dib goosashada iyo isticmaalka daaweynta ka hortagga canabka leh fungicides.